तम्घासको पुतली वजारमा मध्यराति भूत देखेपछी एकजना बेहोस… | ebaglung.com
तम्घासको पुतली वजारमा मध्यराति भूत देखेपछी एकजना बेहोस…
२०७४ श्रावण १२, बिहीबार ११:५६	Footer Slider, Home Slider, Top News, अन्य समाचार, प्रमुख समाचार 2921 पटक हेरिएको !
प्रेम सुनार, गुल्मी, २०७४ साउन १२ । बुढा पुरानाले भन्ने गरेको र कतिपय अहिलेका पीँढीहरुले पनि रातको समयमा देख्ने गरेको भुत–प्रेतको दृश्य गए राती सदरमुकाम तम्घास बजार भित्रै क्यामरामा कैद गरिएको छ ।
रातको सवा एक वजेको थियो । तम्घासको पुतली वजारमा अर्घाखाँची जिपपार्कबाट सोही स्थानका व्यवसायी नेत्र पाण्डे , उनका भतिजा राजु पाण्डे र नयाँगाउँका मदन खत्री लगायतको टोली आउँदै थियो । पुतली बजारको भानु चोकमा एक्कासी सेतो वस्त्रमा धेरै बेर सम्म सेतो वस्त्रधारी भूत-प्रेत उभिई रह्यो । एक जना मदन खत्री डराएर त्यही ढले ।
हो हल्ला भयो । केहि वेरपछि त्यो दृश्य विलिन भयो ।
भर्खर विवाह भएकी महिला , माया प्रेम गर्दा गर्दै मृत्यु भएकी युवती , निकै कलेस साँध्धा साँध्दै प्राण पखेरु गुमाएकी वा सुत्केरी हुँदा हुँदै मृत्यु भएकी महिला किच्केनी बन्छन भन्न अझै पनि घाउँघरमा जनविश्वास छ ।
सेतो पहिरनमा ठुलो पेट , खुट्टा देखिन्नन् । मुहारको थोरै भाग देखिने जुन सेतो कपडा छ त्यो यहाँको मानव प्रयोगमा देखिदैन । साँच्ची कै भूत हो वा के थियो त्यो दृश्य अहिले सदरमुकाम तम्घास बजारमा कौतुहलताको विषया बनेको छ । मानिस पिच्छेका कुराहरु भैरहेका छन् । हेर्दा हेर्दै विलीन भएको त्यो दृश्यका बारेमा घरघरमा चर्चा चलिरहेछ ।
तम्घासमा २०२२ साल देखि बस्दै आईरहेका समाज सेवी ६८ वर्षिय नन्दराम भुसालका अनुसार पुतली वजारको शिवशक्ति सिनेमा हल देखि अर्घाखाँची जिपपार्क सम्म त्यति वेला सम्म मशानघाट थियो । सिस्नो, बाँस लगायत ठुलो झाडी पनि थियो ।
भुसालले भने–‘मैले स्कुल बढ्ने बेला सम्म त्यो स्थान मशानघाट थियो र ठुलो झाडी पनि थियो ।’ त्यस कारणले पनि त्यस वरवर भुत प्रेतले रातमा डराउन दिन सक्ने भएकोले रातको समयमा हिडडुल गर्दा ख्याल गर्नु पर्ने र आगो वा बेसार साथमा लिनु पर्ने बुढापाकाहरुको सुझाव छ ।
हेरौं गएराती सवा एक वजेको दृश्य
भूत- प्रेतको सम्वन्धमा मेरो कुरा
भूत –प्रेत भेटियो भेटिएन पुष्टी गर्ने आधिकारिक निकाय छैन् । जहाँ सम्म म आफैले त्यस्तै १५ १६वर्षको हुँदा राती पिसाव फेर्न वाहिर निस्केको वेला सेतो वस्त्रको मान्छेको आकृति देखेर त्रसिएका्े हुँ । आज विहानको कुरा विहान म चिया पिउन जाँदा तम्घासको पुतली वजार चोकमा धेरै मानिसहरु जम्मा भएर त्यही राती खिचिएको भनिएको तस्वीर हेरी रहेका थिए । चर्चा राती डराउन दिने भनिएको कुरा कै थियो ।
मलाई देख्न साथ उ प्रेम जी पनि आई हाल्नु भयो भनियो । मेले त्यो तस्वीर खिचेको भनिएका व्यक्ति नेत्र पाण्डेलाई सत्यता बुझ्न भनेर चिया पसलमा लगे । साँच्ची हो की होईन भनेर निकै वरे सोधें । उनले नभएको कुरा गर्छु हामी तिन जना मध्ये एक जना भुँईमा ढलेको हो समेत भने । ठिकै छ ल्याउन त फेशवुकमा समेत हालौंला भनेर तस्वीर लिएँ ।
त्यस पछि यहाँका पुराना मानिसहरु संग सोध्धै जाने क्रममा ८० को नेटो काटेका कांग्रेस सभापति भुवनप्रसाद श्रेष्ठको पिता मथुराप्रसाद श्रेष्ठको घरमा पुगे । उहाँ मन्दि जानु भएको छ भन्ने सुने पछि मन्दिर मैं पुंगे । मन्दिरमा उहाँलाई नभेटे पनि दर्जन भन्दा बढि पुराना तम्घासका समाज सेवीहरु बैठक बस्न लागेकै क्रमा भेटे । आज राती भुत प्रेत देखे भन्ने मान्छे र तस्वीर सहित पाएको छु मैले भनेर कुरा राखे पछि हुन सक्छ आज भन्दा साठी वर्ष अघि सम्म त्यो स्थानमा मशानघाट थियो । मैले नै जानें भनेर नन्दराम भुसाल जस्तो पुरानो समाज सेवीले भने पछि त्यो तस्वीर सहितको भनाई पोष्ट गरेको हुँ ।
यस्तो कुरा जनविस्वासमा मात्रै सिमित रहने भएकोले हामीले जनविश्वासको पनि कुरा राख्ने हो, पत्याउने नपत्याउने जिम्मा तपाईहरुको हो र सत्य हो होईन भन्ने कुरा पनि सम्वन्धितलाई मात्र थाह छ । दैविक र भुत प्रेतलाई झुट भन्ने नै हो भने चार वर्ष अघि नयाँगाउँको एक घरमा मान्छेको छायाँ सम्म देखिन्न तर ढुङ्गा वर्सेको वर्सै गरेको देख्ने र अचम्वीत हुने धेरै छन स्थानियवासी ।
केहि दिन अघि चारपाला दरवार भित्र देवत्व उत्रेकी दलित युवतीलाई पागल भन्नेहरु र झुट भन्नेहरु धेरे थिए । तर जव म गएर प्रत्यक्ष भिडियोमा लिएँ । सवैले विश्वास गरे । अहिले ति वहिनीको घरमा हेराउन आउनेहरुको ठुलो घुँईचो छ । उनले कालिमाँ वक्न थाले पछि सवै कुरा पुराउदो रहेछिन भन्ने मानिसहरु धेरै निस्केका छन् । राती वाटोमा किच्केन देखे भन्नेहरु पनि धेरै छन् । यसर्थ पुन म भन्छु विश्वास गर्ने नगर्ने जिम्मा तपाईहरुको हो । मलाई प्राप्त तस्वीर र मैले आफैले भोगेको हुँदा होला उनिहरुलाई पनि भनेर पोष्ट गरेको हुँ ।
पोखराको लखन चोकमा ब्यवसायी र प्रहरी विच झडप
भूत-प्रेतको सम्वन्धमा यस्तो छ, प्रेम सुनारको कुरा
२०७५ आश्विन २९, सोमबार ०९:५८
गल्कोट हटियाबाट छुटेको जीप गुल्मी बिशुखर्कमा दुर्घटना हुँदा दाजु-भाईको मृत्यु !
२०७५ आश्विन २९, सोमबार ०३:२८
मिशेज युनिभर्सल–२०१८ को ताज गुल्मीकी हिमानीलाई
दशै, तिहारको पूर्वसन्ध्यामा ढोरपाटन नगरपालिकाको शुभकामना आदानप्रदान
२०७५ आश्विन २९, सोमबार १९:०९
झरना कँडेल बुर्तिवाङ २०७५ असोज २९ । ढोरपाटन नगरपालिकाले दशै तिहार तथा छठ पर्बको पुर्वसन्ध्यामा शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको…
२०७५ आश्विन २९, सोमबार १६:१७
बगाले थापा समाज धवलागिरिको अध्यक्षमा भीमबहादुर थापा चयन !
२०७५ आश्विन २९, सोमबार ०९:४८
व्यक्ति कै निवासमा नयाँ नेपाली नोटको सटही सुविधा !
२०७५ आश्विन २९, सोमबार ०७:०४
बुर्तिवाङ बजार अनुगमन : अखाद्य पामोलिन तेल र म्याद गुज्रिएका खाद्यबस्तुहरु बरामद !
२०७५ आश्विन २९, सोमबार ०६:०९
दशैँ तिहारको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा तरुणदलका अध्यक्ष लोप्चन नेकपामा प्रवेश !
२०७५ आश्विन २९, सोमबार ०५:०७
प्रवास : अस्ट्रेलियामा बिदेशीहरुले समेत दसैंं तिहार कार्यक्रममा देउसीभैलो खेले (तस्वीर)
२०७५ आश्विन २९, सोमबार ०४:०६
ताराखोला सामुदायिक संचार सस्थाको अधिबेशन सम्पन्न : सामुदायक रेिडयाे सन्चालन गर्ने तयारी
२०७५ आश्विन २९, सोमबार ०३:४७
खाल वजारमा सरसफाई अभियान
२०७५ आश्विन २९, सोमबार ०३:३९
वडा अध्यक्ष खडक थापाबाट शैक्षिक अक्षय कोषको स्थापना
२०७५ आश्विन २८, आईतवार २१:०३
आजको तस्वीर : जाउँ सँगी घुम्नलाई, तुरतुरेको ताल … !
२०७५ आश्विन २८, आईतवार १८:३२
बानपाको शुभकामना आदानप्रदान : चुहावट र भ्रष्टाचार रोक्न सके मुलुक स्वत: सम्मृद्ध बन्छ-तिमिल्सिना
२०७५ आश्विन २८, आईतवार १६:२५
बागलुङमा दशैँ र तिहारको मौकामा एक अर्ब रुपयाँको हाराहारीमा रेमिट्यान्स भित्रिने विश्वास !
२०७५ आश्विन २८, आईतवार १२:४५
साताको तस्वीर : बागलुङ कारागारमा मुढाको चाङ ।
तुरतुरेको पहिरोमा परेर एक जना महिलाको मृत्यु !...
दिनेश शर्मा, वागलुङ (भिङगिठे) २०७५ असोज १ । तुरतुरेको पहिरोमा पुरिएर केहि सम�